Yakaparadzaniswa Mashiripiti: kugovaniswa kwoushamwari kwedhisiki rako | Linux Vakapindwa muropa
Yakaparadzaniswa Mashiripiti: inoshamwaridzika distro kune yako hard drive
Yakaparadzaniswa Mashiripiti kugoverwa kweLinux kunogona kuve shamwari yakanaka kwazvo kune yako hard drive uye mamwe marudzi endangariro. Yeye-isina kugadzikana ndangariro yakakosha kwazvo, nekuti isu tinochengeta yakawanda yakakosha data muzuva redu zuva nezuva, ruzivo rwatisingade kurasikirwa uye rwatinofanira kubata nemazvo. Neichi chikonzero, ivo vanogadzira iyi distro vagadzira ichi kugovera neakawanda maturusi ayo achatibatsira chaizvo neizvi.
Zvino izvi inowanikwa Parted Mashiripiti 2016_01_06, iyo nyowani-mu-imwe vhezheni ine maficha nyowani uye zvese zvishandiso zvakagadziridzwa kuchengetedza zviyeuchidzo zvedu zvakagadziriswa, kugadzira zvikamu, kuzvidzima, kuongorora chimiro chavo, kuzvigadzirisa, nezvimwe Uye zvese muRarama saka haufanire kuisa chero chinhu, ingoisa diski kana USB paunenge uine ISO rakatsva uye bhuti kubva ku RAM.
Vagadziri vakagadzirisa zvese zvinoshandiswa nekusarudzika izvo zvaisanganisirwa mushanduro dzakapfuura dzeiyi Parted Mashiripiti 2016_01_06. Saka tinogona kuve nekuenderana zvirinani uye kugadzikana kwenzvimbo yedu yebasa, kunyanya kana iwe uri nyanzvi uye uchizvipira kugadzirisa midziyo, ino sisitimu inobatsira zvikuru. Bhokisi rese rematurobhu rakatsaurirwa kune chimwe chinangwa
Kernel yakagadziridzwa kuLinux 4.3.2, maturusi aya ave kuwanda, zviputi zvakagadziriswa, kugadzirisa mune yakavhurika sosi mutyairi we AMD GPUs (xf86-vhidhiyo-amdgpu), nezvimwe Chinhu chakanyanya kushata ndechekuti isati yave kugoverwa kwemahara uye kwete nguva refu yapfuura yakave yekutengesa, kunyangwe usatya, mutengo we dhawunorodha vhezheni yazvino iri pasi zvishoma, iine $ 9 chete iwe unogona kuve neiyi inoshanda system. Uye saka isu tichava nezvatinazvo maturusi akadai se:
GParted: kugadzirisa zvikamu zvedu (gadzira, bvisa, saizi, fomati, ...).
Kwayedza: kudzoreredza zvikamu pasina kurasikirwa nedata.
Clonezilla: kugadzira makopi ekuchengetedza uye mifananidzo yemadhiraivha akaoma kana ndangariro dzakazara
fstransform: kushandura pakati peimwe fomati uye imwe yezvikamu.
lsdct: kuve nechokwadi chekuchengetedzwa kwedata.
Zvimwe zvakawanda: Systat, FLTK, Dash, libjpeg-turbo, aic94xx-seq, procps-ng, nezvimwe.
Kunyange zvakadaro kana iwe usiri kuda kubhadhara, iwe unogona kugara uchirodha pasi ese emahara maturusi emahara uye gadzira yako yakasarudzika distro kana kusarudza dzimwe nzira ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Yakaparadzaniswa Mashiripiti: inoshamwaridzika distro kune yako hard drive
Kernel Linux 4.4 LTS inosunungurwa
Linux Mint 18 ichanzi Sarah